Halatra taolam-paty Toliara
vendredi, 16 octobre 2015 18:36
Ambohimasay Toliara II : Taolam-paty telo gony tao anaty kirihitr’ala
Fianakaviana andeha handevina no nahita azy, tany atsimo atsinanan’i Maninday, 10km miala ny tanànan’i Toliara. Natao tao anaty gony, nosaronana ravin-kazo, ary nafenina tao anaty kirihitr’ala tsy lavitra ny fasanan’ilay fianakaviana handevina ireo taolam-paty. Mandeha ny fanadihadiana hamantarana ny nihaviany sy ireo nahavanon-doza.
vendredi, 16 octobre 2015 18:17
FANAFIHANA TOBIN’NY ZANDARY TANY BEFOTAKA ATSIMO
Araka ny loharanom-baovao, voaray avy any an-toerana, dia fantatra izao, fa dia tsy tahotra, tsy henatra, dia sahy nivarotra ireo entam-barotra, na fanaka an-tranon’olona avy norobain’izy ireo tany Befotaka Atsimo ny zoma lasa teo, tao Beharena, tsy lavitra an’i Befotaka ireo dahalo ireo ny Alarobia teo.Noho ny fiaraha-miasan’ny fokonolona any an-toerana sy ny mpitandro filaminana anefa, dia tonga ara-potoana ny vaovao, mikasika ny fandaharam-potoan’ireto dahalo ireto, ka tra-tehaka teo am-pivarotana ny entana halatra ry zareo.Raikitra avy hatrany ny fifandonana, ka vaky nandositra ireto dahalo, koa dia nitohy ny fanenjehana azy ireo hatramin’izao.
Tsaramandroso Pont blanc Mahajanga
vendredi, 16 octobre 2015 13:35
Tsaramandroso Pont blanc Mahajanga: Mirehitra mijoalajoala ny afo
Tokony tamin'ny 12 ora latsaka teo dia tazana avy lavitra ny afo milangalanga izay mandoro ireo trano. Voalaza fa misy zaza mitondra kilema tsy tafavoaka ao antrano.Mbola hifandrombonan'ny maro ny famonoana ny afo.
Tonga ara-potoana teny Iavoloha ny Ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana
vendredi, 16 octobre 2015 08:43
Iavoloha : Hiaka-dapa ireo Ben’ny tanàna vaovao
Hotanterahina anio eny Iavoloha ny fihaonana voalohany eo amin'ny filoham-pirenena amin'ireo Ben'ny tanàna 1676 efa voafidy manerana ny Nosy. Mbola haverina amin’ny 13 novambra 2015 ny fifidianana amin’ireo Kaominina 19 hafa, ka aorian’izay vao hanana Ben’ny tanàna ireo Kaominina ireo.
jeudi, 15 octobre 2015 19:29
Toamasina : Vary 09 kaontenera nisy nangalatra
Vary navoaka ara-dalàna tao amin’ny Port izy ireo, no nanjavona tampoka nony taonga tao Salazamay. Tombanana hatrany amin’ny 300 tapitrisa Ariary ny vidin’izy 9 kaontenera ireo. Araka ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana dia mbola ao Toamasina ireo vary ireo hatreto.
jeudi, 15 octobre 2015 19:26
Tolagnaro : Lehilahy iray maty navadiky ny lakana
Roa lahy izy ireo no niaraka nividy vokatry ny tany sy saribao tany Ifarantsa omaly alarobia. Efa akaiky tsy ho tafaverina ao amin’ny seranan-dakana ao Ambinanibe Tolagnaro izy ireo no navadiky ny rivotra nifofofofo fitsoka ny lakana nentin’izy roalahy, ny entana rahateo navesatra. Nahavotr’aina ny iray mbola tanoranora, fa ilay raim-pianakaviana kosa nilentika ary ora maromaro taty aoriana vao natsingevan’ny rano ny fatiny.
jeudi, 15 octobre 2015 15:41
Nangataka ireo zanak'i Vatovavy mba ho olona avy amin'izy ireo no apetraky ny Filoha Hery Rajaonarimampiananina ho lehiben'ny Governemanta vaovao.
jeudi, 15 octobre 2015 09:36
Antsohihy: Naverina nisamboady ireo Ben'ny Tanàna 8
Raha noheverina fa ankalaza ny faha 57 taon'ny niorenan'ny Repoblika tany amin'ny fonenan'ny Filoha teo aloha Philibert Tsiranana ireto vahoaka notarihin'i Solombavambahoaka Jao Jean izay mitarika ny antokony vaovao MAKALOMBO, dia hay tsy izay no natao tany Anahidrano omaly, fa tsy nankasitrahan'ity député ity ny fametrahana ofisialy sy ny fametahana ny samboady efa nataon'ny minisitry ny atitany, sy ny minisitry ny fahasalamana andro vitsy izay, ka dia naverin'i Jao Jean indray ny fametahana samboady ho an'ireo Ben'ny Tanàna miisa 8 lany tamin'ny anaran'ny MAKALOMBO.
jeudi, 15 octobre 2015 07:12
Hanao hetsika fanadiovana ny tananan'Antananarivo ny Ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana iharahana amin'ny Volontariat, izany dia ho tontosaina ny 23 oktobra 2015 ho avy izao,ka ny hanombohana azy dia ny eny amin'ny faritra anosy sy ny manodidina eny. 
mercredi, 14 octobre 2015 20:34
Kaominina Mahajanga : Nandray ny asany ny Ben’ny tanàna Mokhtar
Nandray ofisialy ny asa maha Ben’ny tanànan’i Mahajanga azy nanomboka androany Andriantomanga Mokhtar Salim. Tsy vaovao amin’ny fitantanana ny tanàna izy, satria efa filohan’ny delegasiona manokana nandritra ny enim-bolana tamin’ny tetezamita.
Page 625 sur 638